ओमेगा लाइम बॉडी बटर | ओमेगा लाइम | HelpMeHemp - सहायता MEHemp
घर उत्पादन ओमेगा लाइम बाडी बटर
ओमेगा लाइम बाडी बटर
मद्दत MEHemp's व्हीप्ड लाइम बडी बटरले तपाईंको छालालाई एकदम कायाकल्प गराउँदछ र लाइमको साथ बनेको हुन्छ ताजाको रूपमा तपाईंलाई खानको लागि गन्ध आउँछ! लाइममा भिटामिन सी हुन्छ, एक शक्तिशाली एन्टिआक्सीडन्ट जसले छालाको दृढता र जीवनशक्तिलाई बिगार्ने हानिकारक फ्रि रेडिकलहरूसँग लड्दछ। मद्दत MEHemp's व्हीप्ड लाइम बॉडी बटर अझ बढी जादुई छ किनकि यसले समावेश गर्दछ मद्दत MEHemp's हस्ताक्षर हेम्प सीड र अर्गन तेल।
मद्दत MEHemp's व्हीप्ड लाइम बडी बटरको विलासी बनावट र आरामदायक गन्ध मसाजको लागि उत्तम छ! तपाईंको शरीरलाई मन्दिरको जस्तो व्यवहार गर्नुहोस् र यो होयस विकृत रूप मा लाथेर धनी र बाक्लो सबै प्राकृतिक उत्पादन तुरून्त सान्त्वना, स्फूर्ति, र बहाल महसुस गर्न को लागी!
अवयवहरू: चिया, नीबू, जैविक हेम्प तेल, टिकाऊ आर्गन
आकार xnumxoz निलो जार 8oz xnumxoz 8oz स्पष्ट मेसन जार
यो चूना माखन यो केहि अरू हो यो तपाईंको छालामा चरम सुख्खा प्याचमा धेरै राम्रो छ, साथै यो एक राम्रो मॉइस्चराइजर हो, र कुनै पनि प्रकारको छालाको दागको लागि राम्रो हो, रेजर जलेको र बम्प हटाउँदछ। धेरै मन पर्यो।
म साथ समयका लागि लाइम बडी माटर प्रयोग गर्दैछु र मलाई यो एकदम मनपर्दछ! सुख्खा छालालाई बाहिर पट्टि टाढा पनि घामलाई पोखाउँदछ! गन्धले तपाईंलाई यो खान चाहान्छ! यो मेरो मात्र लोशन रेजिमेन्ट हो जुन म प्रयोग गर्दछु र म कहिले अरू कुनै चीजमा जान सक्दिन! वरिपरि सबै भन्दा राम्रो सामान!
गन्ध आश्चर्यजनक छ !! यस उत्पादनले मेरो छालालाई यहाँ सुख्खा हावामा पुन: जीवित राख्छ जहाँ म बस्छु। म यस कम्पनीलाई माया गर्छु! :)
बिल्कुल ओमेगा चूने बडी माटर प्रेम - हामी यो मॉइश्चराइजर (अनुहार र शरीर) देखि डायपर रेश सबै को लागी प्रयोग गर्दछौं। अत्यधिक सिफारिश!
मैले पहिला नराम्रो सनबर्नको लागि उत्पादन किनेको थिएँ, त्यसपछि मेरो बाहुलीमा पुरानो क्यामेरा छ जुन मेरो बाहिरी भागको सम्पूर्ण क्षेत्र कभर गर्दछ। तपाईमले देख्न सक्नुहुनेछ यो हेल्पमहेम्प प्रयोग गरेर लगभग एक हप्तामा गएको छ! म यस उत्पादनलाई प्रेम गर्दछु र यसमा विश्वास गर्दछु! यसले खुजली पनि हटायो !!!
मलाई थाहा छैन कहाँबाट सुरु गर्ने! मँ मँ सबै भन्दा मँ पागल भएको छु मद्दत MEHemp ले प्रस्ताव गरेको छ। म विगत केहि महिनाहरुमा मेरो दैनिक जीवनमा चूनाको बडी माछा, अर्गन तेल, हेम्प तेल, र हम्प्ड हिप बिउहरू थप गर्दैछु साथै केही अन्य उत्पादनहरू जुन मँ अझै पक्का गर्दैछु। सबै कुरा अविश्वसनीय छ। बडी माखन सबैभन्दा मॉश्चराइज र मद्दत पुर्‍याउँछ जुन मैले आफ्नो शरीरमा राखेको छु। यसले मेरो सोरायसिसलाई टाढा राख्न मद्दत गर्दछ र मलाई मार्गारीटा (हेहे) जस्तो अलि गन्ध गराउँछ। अर्गन तेलले मेरो अनुहारको सुक्खा छालालाई मद्दत पुर्‍याएको छ र मलाई चम्किरहेको छ, साथै यसले मेरो कपाललाई लामो समयको भन्दा स्वस्थ देखीरहेको छ। मैले बिहान बिहान बेलुका सुगन्धित तेलमा भाँडाको बोट र भाँडाको तेल थप्न शुरू गरें र यसले मलाई सधैं भरिपूर्ण, स्फूर्तिदायी र सकारात्मक महसुस गर्न म मद्दत गर्दछ प्रत्येक दिनको थालनी गर्दा। म कहिल्यै कम्पनीसँग बढी सन्तुष्ट भएको छैन। यसको शीर्षमा क्यारी र त्यहाँ सबैलाई मद्दत MEHemp मा अद्भुत छ र अचम्मको ग्राहक सेवा प्रदान गर्न र उनीहरूको ग्राहकहरु लाई वास्तव मा हेरचाह। केरीले मलाई बुझ्ने तरिकाको हरेक चरणमा मद्दत गरेको छ कुन उत्पादनहरू मेरो लागि सही छन् र मलाई अधिक मद्दत गर्दछ। तपाईले गर्नु भएको सबैको लागि धन्यवाद!
अद्भुत शरीर माखन। विशेष गरी स्केयरिंग कम गर्न को साथ शल्य चिकित्सा पछि मदत।
शल्य चिकित्सा १०/10०/१।। यस शरीरको माखनको साथ मेरो दाग राम्ररी निको भइरहेको छ। राम्रो लाग्छ!
अब राम्रो हिलहरू केवल एक मात्र चीजले मेरा पतिहरू सोरायसिस र मेरो ड्राई क्र्याक हिलहरूको लागि काम गरेको छ। आश्चर्यजनक सबै प्राकृतिक उत्पाद र लाईमको गन्ध मन पराउँछु म फेरि खरीद गर्नेछु। धन्यवाद
चमक यो उत्पाद प्रयोग गर्नाले मेरो छाला चम्किरहेको छ, मेरो झिम्का गायब हुँदै गइरहेको छ। यो छाला प्रकाशको लागि ठूलो हो। प्रेम गर्नुहोस् कि यसमा आर्गन र हेम्प तेल छ। निश्चित रूपमा फेरि खरीद हुनेछ। धन्यबाद मद्दत MEHemp!
एक्जिमा यो लाइम बडी बटर अद्भुत छ। मेरी छोरी सधैं गम्भीर एक्जिमाबाट पीडित छ। उसलाई मद्दत गर्ने उत्पादनहरू फेला पार्न गाह्रो भएको छ। उनी प्रायः गुनासो गर्छिन् कि प्राय लोशन र क्रीम पनि चिल्लो हुन्छन्। यस बडी बटरले उनको छालामा ठूलो सुधार गरेको छ। उनी मन पराउँछिन् र मैले कुनै किसिमले अपील गरेपछि गुनासो गर्दिन। यो चिल्लो छैन र छालामा राम्रोसँग अवशोषित गर्दछ। हामीलाई यो उत्पादन मन पर्छ। यो आश्चर्य कार्य गर्दछ र गन्ध स्वादिष्ट छ!
गन्ध राम्रो छ र मेरो छाला नरम गर्दछ मँ केवल एक हप्ता को लागी यो उत्पादन थियो त्यसैले म राम्रो लाइनहरु लाई कम गर्न को लागी यसको क्षमता को प्रमाणित गर्न सक्दिन, तर यो आश्चर्यजनक गन्ध आउँछ, प्राकृतिक अवयवहरु द्वारा बनाईएको छ, र यति सजिलै क्रीमयुक्त र बाक्लो छ। मेरो छालामा सोस्छ। मसँग धेरै सुख्खा छाला हुन्छ, विशेष गरी मेरा हातहरू किनभने म तिनीहरूलाई काममा लगातार धुन्छु, र यो माखनले उनीहरूलाई केही हदसम्म मद्दत गर्दछ। म निश्चित रूपमा मद्दत मलाई हेम्पबाट बढि उत्पादनहरू खरीद गर्दैछु!
तपाईं रकौं लाइम १. दिनभरि घोडाहरुलाई तालिम दिए पछि खुट्टाको खुट्टा तपाईको खुट्टामा ठुलो छ म मेरो सिट बस्ट गर्दछु र लाइन लाइन माटर लगाउँछु र लगभग सबै कलसहरू केवल तीन अनुप्रयोगहरुमा बन्द हुन्छन् जुन मैले प्रिस्क्रिप्शन र ओभर- काउन्टर मॉइश्चराइजरले केहि पनि मैले प्रयास गरेको छैन त्यस्ता ठूला परिणामहरू दिएका छन्। चूना बटर चट्टान !!!!!! २. y बर्षको उमेर उसको "लाइम" बिना ओछ्यानमा जान सक्दैन मेरो छोराको सम्भावित छाला त्वचा रोग विशेषज्ञ पेडियाट्रिशियनहरूलाई दिइन्छ उनीहरूले दिन सक्ने उनी कठोर रसायन हो तर चून माखनको साथ कुनै रसायनले आफ्नो छालालाई सहज बनाउन र हटाउन नसक्ने rash धन्यवाद!
मलाई मेरो "लाइम" २ चाहिन्छ। y बर्षको उमेर उसको "लाइम" बिना ओछ्यानमा जान सक्दैन उसको छाला र दाग हटाउँदा धन्यवाद!
धेरै राम्रो !! मलाई यो उत्पादन मन पर्छ! पदार्थबाट गन्ध र सबै चीज यसको गुणस्तर हो! मलाई मन पर्छ कि यो जैविक हो। मैले नराम्रो खुट्टाको साथ हर समय खुट्टा क्र्याक गरेको छ। मैले भर्खरै यो उत्पादन मेरो खुट्टामा मद्दत गर्न प्रयोग गर्न सुरू गरें र मलाई यो पहिले नै मनपर्‍यो!
सबै समय मनपर्ने र माया! यहाँ एक गोप्य कुरा छ .... यो ओमेगा लाइम बटरले तपाइँको छालाको रेखाको ख्याल राख्छ अरू कुनै छैन !! यो आश्चर्यजनक छ! यसले धेरै छालाका बिरामीलाई निको पार्छ .... तपाईको छाला सबैभन्दा ठूलो अ is्ग हो - यो विशेष मिश्रणले यस्तो प्राकृतिक तरीकामा मॉइस्चराइज र सुरक्षा गर्छ! साँच्चै तपाईको शरीरलाई एउटा उपहार !!!
अचम्म लागी म यो बडी माटरलाई एकदम मन पराउँछु! मेरो खुट्टामा सबैभन्दा खराब सुक्खा र क्र्याक छाला छ। मैले मेरा खुट्टामा धेरै उत्पादनहरू प्रयोग गरेको छु कि तिनीहरू एक चमत्कार हो भनेर दावी गर्छन्। यस दैनिक -My खुट्टा को उपयोग को एक हप्ता भित्र निको भयो! मलाई यसको गन्ध र बनावट पनि मन पर्छ! याे अास्चर्यजनक छ!
अद्भुत गन्धहरू यस्तो अद्भुत छ यसले तपाईंको आत्मालाई उचाल्छ। वास्तवमा सुख्खा छालाको साथ सहयोग गर्दछ। भावना मन पराउनुहोस्। पर्याप्त हुन सक्दैन।
ओब्स्ड !! पक्कै यो शरीर माखन संग ग्रस्त !!!! यो आश्चर्यजनक गन्ध छ र मेरो छाला को म कहिल्यै प्रयोग गरेको भन्दा नरम छोड्दछ !!!! मैले यसलाई मेरो रातको क्रीमको रूपमा २ महिनाको लागि प्रयोग गरें र मेरो छाला लामो समयको भन्दा राम्रो देखिन्छ।
उत्कृष्ट उत्पादनहरू मलाई यो लाइम बडी माटर मनपर्दछ! यसले मेरो शुष्क छालालाई हाइड्रेट बनाउँछ! यो अद्भुत महान गन्ध !!! म रातमा पनि मेरो अनुहारमा प्रयोग गर्दछु र यो उत्तम छाला इल्युमिनेटर हो !!! यो एक ताजा र सफा गन्ध उत्पादन हो जुन मलाई नुहाउने वा नुहाउने पछि सहीमा राख्न मनपर्दछ !!!
मेरो छाला साटन जत्तिकै हो। म पूरै नै चुलोको बटरमा प्रेम गर्छु, यो मात्र होइन तर मेरो छाला साटन जस्तै स्वादिष्ट गन्ध पनि आउँछ। म मेरो कपालमा आर्गन तेल पनि प्रयोग गर्दैछु र वाह मलाई केही फरक हप्तामा केश कत्ति स्वस्थ देखिन्छ भनेर बताउन चाहन्छु